Girls enezinwele ezimfishane noma obuphelele naphakathi ngokuvamile ufuna okuthile imfashini, obizayo. isikwele esijwayelekile - unesicefe khulu. Futhi abantu abaningi bakhetha ukushintshashintsha ayo quin - a imfashini yesimanje. bob azilingani ngesikhathi sakhe kwakukhona movie stars, izigcawu kanye show ibhizinisi: Salma Hayek, Viktoriya Bekhem, Rihanna.
Grooming wenziwa esekelwe square njalo. Kusukela master ngesikhathi esifanayo anidingi kuphela ifa ngobuhlakani isikele, kodwa abanye ababhekana nayo, khona umcabango futhi zizwakale kahle. Ukuze zonke okwakhe yayo futhi catchiness, le kwekhanda kwenza kube nokwenzeka ukugqamisa izinzuzo ebusweni futhi delicately ukufihla ukushiyeka kwakhe.
Ukuze ukulingana i bob azilingani, futhi ongenalo?
kwekhanda Perfect abesifazane izici boxy noma likhulu kakhulu. Kuyokunikeza lonke ukubukeka umsungulo futhi nesifazane. Kodwa amantombazane kwakhahlela nge izihlathi chubby futhi nxazonke ubuso kungcono ukhethe kwekhanda ezahlukene.
Ngokuqondene nohlobo kanye kwabantu izinwele, ukugunda izinwele lapha ngempela yeningi. Uyahluka ngokuthi kunjalo, kuphela imishini kokusebenza yayo. hair obukhulu kakhulu enqubeni abahlukene nendawo noDavide, futhi izinwele ukuminyana encane umane moisten futhi ayesebenza phambili. Kodwa ukuthi akawuthandi isikwele, quin ikakhulukazi, ngakho-ke curls. Izinwele salokhu kwekhanda okufanele kuqonde. Kungenjalo, esikhundleni izikwele ecacile uzothola isimo engaqondakali ekhanda.
Ukuphathisa ukugunda izinwele?
Classic bob - kwekhanda elula. Kungenza umuntu, ngisho novice master. Kodwa uma udinga nezinwele azilingani - kungcono nochwepheshe. Akuyena wonke umuntu akha ephelele ohlangothini sokuvalelisa, wenze uhlangothi emifushane kunamanye ukuze kubukeka ezikhangayo wadlula phambi kobuso bakho. okumqoka is edging amathempeli, indlela ukusika imicu, tapering ukujula bang uhlobo, uma ekhona izinwele. By the way, ubukeka kahle azilingani bob nge esiphongweni. Kulokhu kungaba ubude ezahlukene, iqonde, ayesebenza emaceleni noma futhi engalingani.
ukuzisika okunekhono Akukhona nje, kodwa futhi staining efanelekayo kungaba gqamisa ezokwenza ekuhlukaniseni esixukwini. Kwembala kubaluleke kakhulu kwekhanda ezinjalo kuba bob engalingani. Izithombe izinkanyezi onobuhle komagazini uqinisekise lesi. Ngokwesibonelo, ukugqamisa futhi umbala zibukeke ukunikeza izinwele ivolumu kanye kwabantu, sikhulise isakhiwo sabo.
Uma unquma ukufaka i-accent ukugcizelela ukunquma nentaba izinwele, a imicu ezimbalwa umbala umbala omnyama. A umthunzi elikhanyayo Uyosho ebusweni, futhi wonke isithombe izokwengeza okwakhe. Kuyinto choice of amantombazane ngokugqamile abathanda ukuba kudume.
bob azilingani: ongakhetha emakhiyubhi
Sabalalisa phezu obuphelele yonke we ezimanzi izinwele isitayela mousse, bese kuba ngu nishaye ezomile.
Thatha ibhulashi round futhi ukoma imicu ngaphakathi, nobuso. wax Little noma ijeli imali kwi amathiphu, sikhulise isakhiwo sabo.
Yenza sokuvalelisa etshekile noma zizgagoobrazny. Sebenzisa esilayidi noma stylish izinwele omfisha, Gags amshiye.
Small zinyakaze izigaba phambi izinwele, ngibashiye okuxekethile ukubiyela ubuso futhi lonke izinwele ukukhulisa ngemuva ekhanda, wagwaza "igobolondo" enhle noma behlangene Ponytail. Ideal for the kusihlwa!
Izici and incazelo yamagama: Yang